पार्टी फुटेपछि खुसुखुसु पैसा ! « Jana Aastha News Online
प्रकाशित मिति : २२ आश्विन २०७५, सोमबार १२:३८
भर्खरै विप्लव समूहका प्रवक्ता खड्गबहादुर विश्वकर्मा (प्रकाण्ड) सरकारको पटके नियन्त्रणबाट मुक्त भई बाटो लागिसके । तर, तत्कालिन माओवादी कार्यकर्ता अचम्म मान्दै छन्, आखिर किन रामबहादुर थापा (बादल) प्रकाण्डको पछि यति हात धोएर लागेका होलान् ?
पार्टी एकीकरणको दौरान विभिन्न बैठक र छलफल चल्दा युवा र विद्यार्थीको हकमा जटिलता आयो । अरु कुरा मिल्न छाडेपछि दुबैतिरका युवा कार्यकर्ता बागबजारतिर गफिन थाल्दा बादलसँग पोहोर वैद्य समूह छाडी फर्किएका एकजनाले फ्याट्टै भने– उमा भुजेललाई पनि त्यस्तै गर्नुपर्ने ! तत्कालिन एमाले कार्यकर्ताले सोधे, ‘किन ?’ उनीहरुको झगडा रहेछ, करोडको । पार्टी फुटेपछि पनि मोहन वैद्यलाई प्रचण्डले खुसुखुसु खर्च दिने रहेछन् । शायद, हिजोआज पनि उनले प्रचण्डबाट पैसा बुझेको हुनुपर्ने ती कार्यकर्ताको अनुमान थियो । तर, प्रकाण्ड गिरफ्तारी प्रकरणपछि प्रचण्डसँग विप्लवहरु सशंकित छन् र कुराकानी हुन छाडेको छ । नत्र, तीन वर्षअघि प्रचण्डले वैद्यलाई रुपैयाँ दिँदा विप्लवलाई बोलाएर जानकारी दिएका थिए । तर, बादल बोलाइएनन् । वैद्यकहाँ पैसा पुगेपछि बल्ल बादलले चाल पाए ।
चुनावको मुखमा केही साथीलाई सेटल गर्नुपर्ने कुरा पनि सम्भव भएपछि उनीहरु वैद्यबाट ‘विद्रोह’ गरी निस्किए । उतिबेला पैसाको झगडा, त्यो झगडामा प्रकाण्डले ‘सिध्याउँछु’ सम्म भनेको रिस र अहिले बादल गृहमन्त्री भएको बेला ! यति कुरा बुझेपछि प्रकाण्डलाई ठूलै अपराधीझैँ अड्डा सारिँदै पूर्वदेखि पश्चिमसम्म घुमाइएको आरोप छ ।